Jwxo-shiil oo Noqday Waxartii Kildhiga Madax la Gashay ee Adhiga Dhex Oraday – Rasaasa News
Sep 10, 2009 Jwxo-shiil
Jaba laga hayaamiyo meel aan jid mariniyo jiq cidla ah miyaan galay, ma jirabay dadkaygii, ma jacddaday naftii hure, jid walbaba miyaan xidhay, jahwareer miyaan dhigay, dab miyaan ku joogsaday jaahaygii la wada nacay, jirab kali ma igu yahay … ooheey ah ooheey ah….
Eebahay amarkii Jabaddada ay reer miyigu ka guuraan ayaa waxay kaga tagaan alaabooyinka ayna u baahnayn sida Fur Kildhiyada, Dhiilaha Qarka jaban, Distiyada duusduusmay iyo Kildhiyada la nacay.
Meesiyadda saddexda ah ee ay dadka reer miyiga ah aadka u dhaqdaan ee ay noloshoodu ku xidhan tahay, waxaa maalin walba loo daaqsin geeyaa dhulka daaqsinta wanaagsan leh, waxana inta badan raaca oo ilaaliya meesiyadaas dad u badan dhalin yaro.
Adhiga oo ka mid meesiyada xooga loo dhaqdo ayaa ah laba nooc oo ah Riyo iyo Ido, hadaba inta uu adhigu fooftaanka ku jiro ayaa waxaa uu mararka qaarkood ku soo baxaa Jabad casyo laga guuray, waxayna Riyuhu ku caraan jabada iyaga oo ay ugu wacan tahay Oon ama Saqajaanimo kale, waxayna afka la galaan weel kasta oo ay arkaan. Mararka qaarkood ayey waxaraha aaranka ahi madaxa la galaan Kildhiyada Jajaban ee yaal dudooyinka laga guuray, dabadeena waxaa u suurto galiwayda in ay dib madax ugala baxaan Kildhiga, waxayna miciin bidaa waxartaasu in ay orado.
Hadaba, kolka ay waxarta oo uu maduxu qarsoon yahay oo aan waxaba arag, waliba ay shanqadhi ka yeedhayso ay xaga adhiga u soo orado, adhiga intiisa kale oo dhan wuxuu isku dayaa in uu ka cararo waxarta madaxana bahalka ka ah inta kalena waxarta ka ah, waxarta laftigeedu way daba oradaa adhiga iyada oo shanqadha dhaysanaysa kolbana neef ku dhacaysa.
Caruurta iyo dadka makasta ah ee adhiga la jooga way ku adag tahay in ay waxarta dhibka haysta ka bixiyaan, Adhiga intiisa kale ee Oradku ka dhamaadayna ay dajiyaan sidaasi ayuuna Adhiga iyo Waxartuba u caraaran inta uu kala kulmayo wax garad dhibaatada ka bi,iya majaahidiinta. Hadiiba, ay Waxartu waydo wax madaxa Kildhiga uga bixiya way neef qabatowdaa oo waxay noqotaa sakaraad, Adhiguna kama fogaadee kiiyoo yaaban ayuu meel ka daawadaa, ugu damabynta waxaa iyada iyo Adhigaba calfada habar dugaag.
Mutuhda qormada qoraalkan, ee aan u soo qaatay Waxarta kildhiga madax la gashay, waxaa ka dhigan maanta Jwxo-shiil, oo aan u iman ONLF iyo ummada Somalida Ogadeeniya wanaag u samee, balse u yimi hunguri xumo iyo madaxtinimo jacayl, waan kii kolkiiba isaga oo aan Kaadir soo marin mareegta madax dalaq siistay.
Hadaba, Jwxo-shiil, Waxar ma aha ee waa dad, dadkana xoog laguma qabto, laakiin inta lala fadhiisto ayaa wax loo sheegaa oo la yidhaahdaa sida aad u dhaqmayso ma wanaagsana dantuna kuma jirto, hadii uu diidana dan baa looga baxaa. Waana mida maanta haysata Jwxo-shiil oo ayna arki karin ummada Somalida Ogadeeniya, sababaha ayna u arki karina waxaa ka mid; wuxuu uu dumiyey halgankii ay dad iyo duunyaba ku beeleen, waa dilaa dambiile ah, marka cidina ma doonayso in ay wax la wadaagto dambiile, waa uun laga cararaa, isaga laftigiisu wuxuu is lee yahay dhibaatadan ku haysata bal dadka dhex orad in aad hesho cid ku caawisa oo dhibaatadan qoorta kuugu jirta kaa bixisa.
Jwxo-shiil, dhibaatada haysataa caawis ma leh, waayo cid caawin kartaaba ma joogto, kuwa ay wax wadaageen laftigooda waa u cadow oo ma ogola in ay caawiyaan, caruur iyo caaqaq baa ciidan u ahaa, waxa qoorta ugu jira kama saari karaan, cid kale oo ka saarina ma ay jirto, kolka waa uun Jwxo-shiil neefta haysaa ha disho.
Halganka ummada Somalida Ogadeeniya ee ay horseedka ka ahayd Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo], Kolba waraabe ha ugu yimaado Yurub iyo waqooyiga Maraykanka ee ay diddmada ummadu ku timi.